Nosy Serangan (Pulau Serangan) any Bali. Indonezia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Nosy Serangan (Pulau Serangan) any Bali. Indonezia
Nosy Serangan (Pulau Serangan) akaikin'i Bali
Serangan. Nosy Turtle akaikin'i Bali
Serangan dia nosy kely iray any atsimon'ny morontsiraka atsimon'i Bali, amin'ny halavirana 10 km miala an'i Denpasar. Ny velarantanin'i Serangan dia 5 toradroa. km. Ny isam-ponina maharitra dia mponina manodidina ny 3.
Ity nosy ity dia matetika antsoina hoe Turtle, satria ireo biby mandady no miaina eo amboniny amin'ny toe-javatra voajanahary. Voatazona ao Serangan izy ireo ao amin'ny Conservation and Breeding Center. Ho fanampin'izay, misy iray amin'ireo tempolin'i Bali hajaina indrindra - Dalem Sakenan.
Ny fomba fiaina nentim-paharazana dia voatahiry ao Serangan. Mampifandray an'i Bali amin'ny alàlan'ny autobridge 110 m lava izy io. Manana seranana marobe amin'ny valan-javaboary i Serangan, na dia tsy hita eto mihitsy aza ny biby dia. Tsy misy hotely eto amin'ity nosy ity. Marina, afaka mahita trano vahiny ianao.
Misy tanàna 7 ao Serangan. Mamboly katsaka, tsaramaso ary voanjo ny mponin'ny nosy. Izy ireo koa dia mirotsaka amin'ny famokarana fahatsiarovana isan-karazany, amidy izany amin'ireo mpizahatany.
Serangan Island Island
Ny fotodrafitrasa Serangan dia miompana indrindra amin'ny atsimo andrefan'ny nosy, izay misaraka amin'ny faritra sisa amin'ny lakandrano noforonina namboarina, izay 10 m ny sakany. Afaka mandeha eny amin'ny arabe tery ianao, mankany amin'ny trano fisakafoanana misy lovia trondro sy hazan-dranomasina, mividy vokatra trondro vaovao ao amin'ny magazay.
Ny tempoly sy ny torapasika dia any avaratra atsinanan'ny Serangan.
Inona no azon'ny mpizahatany atao eto amin'ny nosy:
Fialan-tsasatra amin'ny tora-pasika.
Fitsidihana ny Ivontoerana momba ny fiarovana sy ny fiompiana fano.
Milomano miaraka amin'ny antson-dranomasina.
Fanofanana momba ny antsitrika scuba.
Fitsidihana ny dolphinarium.
Manintona an'i Serangan:
Tempolin'i Beji Tirtha Harum (Pura Beji Tirtha Harum)
Tempolin'i Hindu Dalem Sakenan (Pura Dalem Sakenan) ao amin'ny nosy Serangan
Tempolin'i Dalem Sakenan (Pura Dalem Sakenan)
Moske amin'ny maha moske syuhada anao
Ho an'ny fidirana ao amin'ny Nosy Serangan, dia andoavam-bola - 2 rupees amin'ny fidirana amin'ny moto ary 000 5 rupees raha miditra amin'ny fiara.
Ny Nosy Nusa Cheningan dia miorina amin'ny morontsiraka atsimon'i Bali. 10km miala an'i Denpasar
Address: Pulau Serangan 80114, Dauh Puri Kangin, Bali, Indonesia
mandrindra: -8.737497, 115.227098
Nosy Serangan amin'ny sari-tanin'i Bali
Nosy Serangan amin'ny sarintany satelita
Afaka mahita nosy amin'ny sari-tany misy fifandraisana ianao ary manamboatra làlana mankany aminy amin'ny alàlan'ny sari-tanin'i Bali eo amin'ny faran'ny pejy.
Bisy akoho any Goatemalà (Chickenbasy)
Masina / fanehoan-kevitra amin'ny Bisy akoho any Goatemalà (Chickenbasy) tsy misy